प्राइमले सम्पन्न गर्‍यो कन्काईलाई प्राप्ती गर्ने प्रकृया, आइतवारदेखि एकिकृत कारोबार
भदौ २६, काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले कन्काई विकास बैंकलाई प्राप्ती गरी भदौ २९ गते आइतवारदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने भएको छ । बैंकले बिहीवार सूचना जारी गरी आइतवारदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने जानकारी दिएको हो । गत साउन २२ गते दुवै कम्पनीले विशेष साधारण सभामार्फत प्राप्ती सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
यी दुई कम्पनीविच प्राप्ती गर्ने समझदारी पत्रमा गत जेठ २२ गते हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भदौ १५ गते प्राप्ती सम्बन्धी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको प्राइमले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट भदौ २५ गते स्वीकृति पाएको थियो । प्राइम र कन्काई बीच १०० कित्ता कन्काई विकास बैंकको शेयर बराबर ७१ दशमलव ५ कित्ता प्राइमको शेयर दिने गरी शेयर स्वाप रेशियो कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम आइतवारदेखि प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु हुनेछ ।
एकिकृत कारोबारपश्चात बैंकको केन्द्रिय कार्यालय हाल प्राइम कमर्सियलको कमलपोखरी स्थित केन्द्रिय कार्यालयमा नै रहने बैंकले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । एकिकृत कारोबार गर्दा दुवै संस्थाको तथ्यांकलाई सफ्टवेयरबार वित्तीय कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भदौ २८ गते शनिवार एक दिन कन्काई विकास बैंकले प्रदान गर्दे आएको बैंकिङ सेवाहरु बन्द रहने समेत सूचनामार्फत जानकारी गराईएको छ ।
कन्काईलाई प्राप्ती गरेपश्चात प्राइम बैकको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ८३ करोड ३६ लाख २६ पुग्नेछ । हाल प्राइमको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख २६ हजार र कन्काईको रू. ५१ करोड ५० लाख रहेको छ । प्राप्ती पश्चात बैंकको हाल रहेको संख्या ७३ मा २१ ओटा शाखा थप भई ९४ पुग्नेछ । प्राइमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्र्जर तथा प्राप्ती गर्दै जाने रणनीति अन्तर्गत कैलाश विकास बैंक तथा ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यी संस्थाहरुलाई पनि कात्तिक महीनाभित्र प्राप्ती कार्य सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार शुरु गर्ने लक्ष्य रहेको बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । यी दुवै कम्पनीहरुलाई प्राप्ती गरेपश्चात बैंकको शाखा १९४ पुग्नेछ ।
कन्काईलाई प्राप्ती गर्ने सम्झौता हुन अघि प्राइमले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता भाडिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ महीना भित्र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम प्राइमले कन्काईलाई प्राप्ती गर्न लागेको हो । ओम डेभलपमेन्ट बैंक भने एनएमबि बैंकसँग मर्जरमा जाने तयारीमा रहेको छ ।
सवारी व्यवस्थापन शुल्कमा वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारको मनपरी [२०७६ फागुन, १५]
चामुण्डा–ठाटीकाँध जोड्ने झोलुंगे पुलको निर्माण गरिँदै [२०७६ फागुन, १५]
गुरुकुल चलाउन वर्षेनि महायज्ञ [२०७६ फागुन, १५]
ललित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला चैतमा[२०७६ फागुन, १५]
चामुण्डा–ठाटीकाँध जोड्ने झोलुंगे पुलको निर्माण गरिँदै
कावा खोलामा पक्की पुल निर्माण शुरू